वेस्टमिनिस्टर को महल - को को Volyn क्षेत्र शक्ति symbolizing, Lutsk को शहर को मुख्य प्रतीक। यो सबैभन्दा पुरानो र ठूलो मध्ये एक छ युक्रेनको मा महल "युक्रेन7आश्चर्य" को दर्जा मा पहिलो स्थानमा ओगटेको छ। यो एक रोचक इतिहास, अचम्मको वास्तुकला, अचम्मको स्थिरता, पुरातन Bells, एक विशाल संग्रह दावा knightly टूर्नामेंट र अझ थप। र गढ को 200-रिव्निया नोट मा प्रतिनिधित्व गर्न सम्मान गरिएको थियो।
वेस्टमिनिस्टर महल इतिहास
र को वेस्टमिनिस्टर - (तल्लो त्यहाँ Lutsk अर्को आधा-बर्बाद छ रूपमा) Lutsk (सबै भन्दा साधारण), माथिल्लो: मिति, उहाँले तीन नाम छ।
महल क्सी शताब्दीमा Rurik मा स्थापित भएको थियो। महल घेराबन्दीको योद्धाहरू6महिना लामो Boleslaw को बहादुर, भइरहे गर्दा पहिलो पटक 1075 मा उल्लेख लागि आफ्नो इतिहास मा। सुरुमा, यो एक अपेक्षाकृत सानो काठको गढ थियो। यो marshes घेरिएको एउटा टापुमा स्थित थियो। यस्तो अनुकूल स्थिति पनि आक्रमणकारिहरुमा विरुद्ध युद्धमा मा होस्टहरूको लाभ दिनुभयो। नियमहरूमा Volyn Lyubart Gediminovich (गलिशिआ-Volyn राजकुमार Andrei Yurevich द्वितीय को व्यवस्था मा छोरा) को किनाराको, महल पूर्ण ईटा पुनर्निर्माण गर्दा 1340 1350 साल देखि अवधि, मा। नयाँ पर्खाल निर्माण को क्षेत्र वृद्धि जो पुरानो, वरिपरि erected थिए। साथै, महल वरिपरि विशेष बाँध erecting, पानी स्तर वृद्धि। एक विशेष drawbridge को खाडल पास गर्न गरिएको थियो।
को XIV शताब्दीको अन्त मा यो लिथुआनिया को ग्रैंड Duchy को Lutsk दक्षिणी राजधानी गरे जो ड्यूक Vytautas, सत्ता आए। उहाँको अधीनमा शहर फस्टाए र Volyn क्षेत्रको एक शक्तिशाली, राजनीतिक धार्मिक र प्रशासनिक केन्द्र भयो, र वेस्टमिनिस्टर जो उहाँले यो दिन छ महल, को रूपरेखा थियो। यो 1429 मा राजकुमार गरेको महल दरबार, युरोपेली Monarchs एक सभा छ। यो तुर्क आक्रमणकारिहरुमा र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू विरुद्ध युरोप सुरक्षाको प्रश्न थियो। Vytautas मृत्यु हुँदा, ड्यूक जुन बेलामा आफ्नो भाइ Svidrigaylo को पुनर्गठन पूर्ण थियो भयो। त्यो किन Lutsk महल, अक्सर पनि महल तीन अगुवाहरू भनिन्छ।
आश्चर्यजनक, को वेस्टमिनिस्टर आज Lutsk मा महल लामो इतिहास समयमा उहाँले धेरै sieges बाँचे भन्ने तथ्यलाई बावजुद, राम्रो अवस्थामा छ। Boleslaw पछि 1149 मा बहादुर काठ Detinets को Rostov-Suzdal र कीव राजकुमार पक्रन प्रयास यूरी Dolgoruky, इरादा गलिसियन् राजकुमार व्लादिमीर Vladimirovich एक गढ घेर्नु बस एक वर्ष पछि र। Yaroslav - पाँच वर्षपछि नै उद्देश्य आफ्नो भाइलाई द्वारा गरिएको थियो। 100 वर्षपछि 1255 मा, Lutsk महल Lyuberta मा सुनौलो राज्यपाल Kuremsa आक्रमण। उहाँले काठ Detinets नष्ट गर्ने प्रयास गर्ने अन्तिम, थिएन।
1349 मा Casimir र 1431 मा Jagiello, र 1436 मा लिथुनियन् राजकुमार Sigismund: पोलिश राजा जित्न प्रयास महल यसको पत्थर पर्खालहरु पुनर्गठन पछि।
राजा Jagiello को महल को संरक्षण को लागि परम्परा
पोलिश राजा जफत र Volyn वेस्टमिनिस्टर महल कब्जाको लिन खोज्दा भीषण लड पछि, महल अझै onslaught सामना र प्रान्तीय को स्वतन्त्रता रक्षा गर्न सक्षम छ। को पौराणिक कथा अनुसार, गढ रक्षक को छैन केवल विश्वसनीयता आफ्नो व्यक्तिगत कौशल जीत मदत, तर पनि। लामो र थकित कब्जाको पछि, बारूद समाप्त भएको छ जब, स्थानीय पशु शवों decaying डंडे Catapult निर्णय गरे। मरेका जनावर देखि आगो अन्तर्गत डंडे अझै पनि retreated।
पछि, गढ प्रयोग
Lutsk महल वेस्टमिनिस्टर र आफ्नो वकील को Tatars को पनि आक्रमण सामना गर्न सक्षम थिए। 1569 मा, एक शाही निवास जुबजाना संघ र गठन Rzeczpospolita, महल हुँदा अन्तमा गरिएको छ। को XVII सताब्दी द्वारा गढ यसको रक्षात्मक क्षमता गुमाउन थाले। यो समय बसा महल: को कोर्ट, को बिशप, स्टेशनरी, घरेलू संरचना को निवास। माथिल्लो र तल्लो महल को क्षेत्रहरूमा यो सम्भव दुवै faiths को आर्य पूरा गरिएका जो ल्याटिन र अर्थोडक्स pulpit थिए। एक Lutsky न्यायाधिकरण Volyn भन्दा, तर पनि अन्य प्रान्त एक नम्बर मा मात्र होइन शक्ति थियो।
को XIX सताब्दी को मध्य देखि जटिल र अस्वीकार गर्न थाले गर्नुभयो। र 1863 मा, अधिकारीहरु यो फुकाल्नु र निर्माण सामाग्री रूपमा बेच्न निर्णय गरेका छौं। धरहरालाई र वरपरको पर्खाल गएर 373 rubles को लागि "हथौडा को तल गए"। खुसीको कुरा, महल 1864 मा आयोग कीव परिसर को तोडफोड निषेधित किनभने, बेच्न समय छैन। तर तल्लो महल थप दुःखी भाग्य राखेका।
1870 मा, त्यो, महल दमकल मा बसे शहर नियन्त्रणमा सञ्चालन गरिएको Vladycha टावर बूथ, अधिक बनाए। 1918 मा, महल को आधार मा एक काठ मंडप र लबी एक गर्मी थिएटर बनाइएको थियो। यो समय मा सबै क्रोध छलफल थिए जो तथाकथित "जीवित तस्वीर", देखाउँछ। र त्यहाँ Lutsk पहिलो सिनेमाहरू एक थिए।
आज वेस्टमिनिस्टर महल, वा Lutsk महल, एक ऐतिहासिक संग्रहालय र राष्ट्रिय स्मारक।
टाढा, Vladycha, Styrovaya: बलियो किल्ला जो छन् धरहरालाई प्रत्येक कुनामा, एउटा अनियमित त्रिकोण को आकार छ। चरा गरेको उडान देखि शहर हेर्न खडा छन् जो आउटरीच स्थित पश्चिम टावर देखि। टावर तत्व विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य प्रतिबिम्बित। उदाहरणका लागि, मुख्य प्रवेश माथिको मुख्य मोहरा मा, त्यहाँ दुई arches छन्। पहिले, तिनीहरूले पिट भन्दा बस्छन जो drawbridge देखि प्राप्त गर्न सम्भव थियो जसमा पदहरू थिए। आज arches bricked र सामान्य प्रवेश पुल को सट्टा बनाइएको थियो।
भित्र टावर दुई सर्पिल staircases छन्। धरहरालाई प्रत्येक जो प्राचीन प्रिंट र यो महल समर्पित चित्रहरू, साथै प्राचीन नक्सा Volyn क्षेत्र को एक प्रदर्शन घरहरुमा धेरै स्तर, छ। शीर्ष तल्ला मा - पुरानो खिलौने, कुञ्जीहरू, बोतल र अन्य वस्तुहरूको एक प्रदर्शनी। Vladycha मा टावर पनि शहर र किल्ला समर्पित गर्ने प्रदर्शनी समावेश गर्दछ।
यार्ड मा टावर भ्रमण अघि कब्जाको लागि प्रयोग उपकरण विभिन्न उपकरण, मध्य युग देखि संरक्षित छन्, र सुरक्षा गर्न, साथै। को xvi शताब्दीमा यो जहाँ मान्छे, सामान्यतया टाउको काटन कार्यान्वयन थिए यो क्षेत्र, मा कार्यान्वयन को एक ठाउँ थियो।
को गढ मा हो: तहखाने, राजकुमार दरबारमा, एक प्रान्तीय खजाना र आर्य कोर्ट घरमा। आंशिक Lutsk पहिलो मसीही मण्डली थियो जसले गिरजाघर Ioanna Bogoslova, रूपमा संरक्षित। यसलाई राजकुमार Liubard त्यहाँ गाडे भने छ।
मन्दिरको रहलपहल नजिकै पुरानो टाइल र इँटा को प्रदर्शनी स्थित छ। यहाँ तपाईँ विभिन्न आकार र उमेरका इँटा देख्न सक्छौं। केही उदाहरणहरू त्यहाँ पनि प्राचीन inscriptions छन्। अझै पनि यार्ड मा, तपाईं काठ भवनहरु र पुरानो धातु वस्तुहरु को रहलपहल देख्न सक्छौं।
वेस्टमिनिस्टर महल पनि (केवल युक्रेनमा) पुरातन Bells को एक ठूलो संग्रह, मुद्रण संग्रहालय र हतियार को संग्रह लागि प्रसिद्ध छ।
मान्छे को गढ अस्तित्व नै यसको बाहिरी पक्षमा धेरै inscriptions बाँकी। वास्तवमा, टावर बीच सबै पर्खालहरु फरक शब्द ढाकिएको छन्। मूलतः यो मान्छे र मिति नाम छ। पर्खाल मा पुरानो रेकर्ड भएको 1444 साल देखि तिथिहरु। Inscriptions फन्ट र सुलेखन vytsarapyvaniya तरिका को निहित किसिम। तिनीहरूलाई बीच यस्तो बहिनीहरू Lesia Ukrainka, 1891 देखि ओल्गा Kosach रूपमा प्रसिद्ध मान्छे को रेकर्डिङको छन्।
यहाँ हामी वेस्टमिनिस्टर महल, तपाईँ संग र पश्चिमी युक्रेन को यस्तो रंगीन र आकर्षक आकर्षण भेटे। Lutsk जो बीच, खैर, त्यहाँ पनि तल्लो महल को remnants छन् रोचक ठाउँहरू, धेरै संग यसको अतिथि स्वागत। तर वेस्टमिनिस्टर महल 10:00 देखि 18:00 गर्न दैनिक पर्यटकहरु पर्खिरहेको। प्रवेश शुल्क मात्र 10 UAH बच्चा लागि वयस्कहरूको लागि (rubles 25 रूसी) र UAH2(5 rubles।) छ। तर टावर भ्रमण र भ्रमण सुन्न चाहनुहुन्छ गर्नेहरूलाई, 50 UAH तिर्न हुनेछ (130 rubles भित्र।)। Lutsk मा आएको, र आफ्नो हात को लामो इतिहास छुन!
हैटी एक प्रमुख भूकम्प
अस्ताना को दिन कहिले हो? शहर दिन अस्ताना मा
Sapropel - यो के हो र कसरी प्रयोग गर्ने? sapropel को निकासी
इलाका र युमेन क्षेत्रको कुल क्षेत्र: विवरण र रोचक तथ्य
सिमुलेशन मोडेल। सिमुलेशन मोडेल को विकास को चरणमा
आधार र प्रक्रिया: युक्रेन को नागरिकता कसरी प्राप्त गर्न
तटस्थ - यो जस्तै छ? अर्थ र उदाहरण
गौरी खान - प्रिय "बलिउड राजा"